अर्को हप्ता माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङमार्ग 'ब्रेक थ्रु' - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
अर्को हप्ता माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लामाबगरस्थित बाँधस्थल पुग्ने पहुँचमार्गको लागि निर्माणाधिन सुरुङमार्ग अर्को साताभित्रै बे्रक थ्रु हुने भएको छ ।
यो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग खुल्नेछ भने २०७२ बैशाख १२ पछि रोकिएको लामाबगरस्थित बाँधस्थलको काम पुनः सुरु गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ । सुरुङमार्ग खुलेपछि लामाबगरसम्मको सडक सुचारु हुनेछ ।
२०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पले प्रवेशमार्गको काब्रेभिरक्षेत्रमा सडक भत्किएको थियो । भिर काटेर निर्माण गरिएको सडक भूकम्पले भत्किएर त्यही ठाउँबाट सडक लैजान अप्ठेरो भएपछि काब्रेभिरबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्न थालिएको हो । काब्रेभिरमा सडक भत्किएर यातायात अवरुद्ध भएपछि अहिलेसम्म बाँधस्थलको काम हुन सकेको छैन । दोलखा बजारबाट लामाबगरसम्मको ६८ किलोमिटर पहुँचमार्ग मध्ये भोर्ले र काब्रे भीरमा सबैभन्दा बढी सडक क्षति भएको थियो ।
‘यही हप्ता भित्र सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु हुने योजना थियो’ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले भने ‘अन्तिम भागमा कमजोर चट्टान आएकाले केही दिन यता कामको गति घटेको छ ।’ विगतमा दैनिक ५ मिटरसम्म सुरुङको काम हुँदै आएकोमा केही दिनयता दैनिक मुस्किलले २ मिटर प्रगति छ । कमजोर चट्टानका कारण बढी सुरक्षात्मक व्यवस्थाका काम बढी गर्नु पर्ने भएकाले काम ढिला भएको डा. न्यौपानेले बताए ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँधस्थलसम्म यातायात सञ्चालन भै त्यसक्षेत्रका काम सुरु गर्न बाटो खुल्ने छ भने लामाबगर र लप्ची क्षेत्र जाने यात्रुहरुलाई आवतजावत गर्न समेत सहज हुनेछ । आयोजनाले काब्रेभिरबाट ३ सय ३७ मिटर सुरुङमार्फत यातायात सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाएको हो ।
सोमध्ये बुधबार दिउँसोसम्म १३ मिटर मात्र सुरुङमार्गको काम बाँकी छ । यही गतिमा अबको ५ दिनभित्र पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब १३ मिटर बाँकी भएकोले कुनै समस्या नआए अर्को हप्ता साताभित्र सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ हुनेछ ।’ सुरुङमार्ग निर्माणको काम चौबीसै घण्टा भइरहेको छ । तथापि लामाबगरसम्म जाने यातायात अभावमा सुरुङमार्ग काब्रेभितिरबाट मात्रै खन्नु परेकोले यति ढिलो भएको हो ।
इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान ढुवानीमा ढिलाइ भएर पनि आयोजनाको काम ढिलो भएको हो । अत्यधिक भारका सामान ल्याउनका लागि सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरमा डाइभर्सन निर्माण गर्नुपर्छ । तर सुनकोशी नघटिसकेकोले डाइभर्सन निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार पुसको तेस्रो सातासम्म सुनकोशीमा डाइभर्सन बनिसकेपछि इलेक्ट्रोमेकानिकल कामले पनि निरन्तरता पाउँछ ।
आयोजनाको गोगरडाँडाबाट पनि हेडरेस सुरुङ निर्माणको तयारी भएको छ । ठाडो सुरुङको माथिल्लो भागसम्म पुग्ने ३ किलोमिटर पहुँचमार्ग पनि क्षतविक्षत भएकाले वैकल्पिकमार्ग बनाएर त्यहाँसम्म गाडी पुग्ने व्यवस्था भएको छ । आयोजनाको ठाडो सुरुङ निर्माणको काम पनि रोकिएको छ ।
प्रवक्ता न्यौपानेले केही दिनमै ठाडो सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिए । २ वटा ठाडो सुरुङमध्ये ३ सय ६० मिटरको तल्लो खण्ड २ वर्ष अघि नै पूरा भएको छ । माथिल्लो ३ सय १० मिटर मध्ये तलबाट १ सय ४० मिटर पनि पूरा भएको छ । बाँकी सुरुङ माथिबाट तल ‘डाउन दी होल’ विधिबाट खन्नुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए । आयोजनाको विद्युत गृहको काम र प्रसारण लाइनको काम भुकम्प र नाकाबन्दीले ८ महिना जति रोकिए तापनि त्यसपछि निरन्तर जारी छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रसारण गर्न विद्युत्गृह गोंगरबाट खिम्तीसम्म बिजुली जोड्नका लागि २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ । चार लटमा आयोजनाको काम भइरहेको छ । आयोजनाको सिभिल निर्माणमा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन, हाइड्रोमेकानिकलमा टेक्सम्याको इण्डिया लिमिटेड, इलेक्ट्रोमेकानिकलमा अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो जीएमबी र प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माणमा भारतको केईसी इन्टरनेश्नल लिमिटेडले काम गरिरहेका छन् । आयोजनाको काम करिब ८३ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।